एक हप्तादेखि हराएका युवक फेवातालमा तैरिहरेको अबस्थामा मृत फेला (भिडियो सहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. एक हप्तादेखि हराएका युवक फेवातालमा तैरिहरेको अबस्थामा मृत फेला (भिडियो सहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
एक हप्तादेखि हराएका युवक फेवातालमा तैरिहरेको अबस्थामा मृत फेला (भिडियो सहित)
पोखरा : एक हप्तादेखि हराएका युवक फेवातालमा मृत अबस्थामा फेला परेका छन्।
पोखरा २२ पुम्दीभुम्दी बसोबास गर्ने सन्तोष परियारको शव फेवातालमा तैरेको अवस्थामा एक हप्तामा फेला परेको हो। पुष २२ गते सवा एक बजे पुम्दीभुम्दीको चिहानडाँडामा पिकनिक खान १०।११ जना व्यक्ति गएकोमा अबेर रातिसम्म परियार नर्फके पछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । अन्दाजी २४।२५ वर्षीय मृतक परिवारमा कोही कसैलाई नभनिकन पिकनिक खान गएका थिए ।
प्रहरीले खोजतलास गर्ने क्रममा पिकनिक खान गएको ठाँउबाट ३ सय मिटर पश्चिमतर्फ फेवातालमा बुधबार बिहान शव फेला पारेको हो । घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको गण्डकी प्रदेशका प्रहरी नायव उपरिक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मीले जानकारी दिनु भएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको January 13, 2021 January 13, 2021 292 Viewed